Abavelisi be-SMB AP kunye nababoneleli - i-china SMB AP Factory
EAP380-L SMB Smart yangaphakathi 802.11ac Dual Band AP
I-EAP380-L lishishini elitsha elingenaxabiso kwi-Wi-Fi AP (Indawo yokuFikelela) eyaziswa yiDCN. Le AP ixhasa zombini i-802.11ac kunye ne-802.11n esemgangathweni nge-Mega Ethernet ephezulu yokunxibelelana. Inkqubo ephezulu yokudityaniswa kwezinto inokufikelela kwi-733Mbps. Irediyo ye-2.4GHz ixhasa umgangatho we-802.11n ukuya kuthi ga kwi-300Mbps yokuhamba; Irediyo ye-5GHz ixhasa umgangatho we-802.11ac ukuya kuthi ga kwi-433Mbps yokuhamba. I-EAP380-L ibonelela ngokusebenziseka okuninzi kwirediyo, iselfowuni, ukhuseleko kunye nobunjineli bezithuthi njl.